Yuunvarsiitiin Amboo meeshaleewwan gara garaa Yuunvarsiitii Booranaaf gumaache - ETHIOPIANS TODAY
Abbootiin Gadaa, jaarsoliin biyyaafi hawaasni Yuunvarsiitii Booranaa deeggarsa taasifame kanattii gammaduu himan. Yuunvarsiitii Booranaa ijaarsasaa marsaa jalqabaa xumuruun marsaa ittaanu jalqabeetin jira. Barataas simatee baruufi barsiisuu jalqabuuf qophii yeroo xumuraa jiruutti Yuunvarsiitiin Amboo deeggarsa meeshalee barnootaa, kitaabilee adda addaa, meeshalee mana nyaataa barattootaafi komputeroota.
Pireezidaantiin Yuunvarsiitii Booranaa Dr. Bokkuu Xachee deeggarsa isaaniif taasifameetti kan gammadan ta’uu himaniiru.Pireezidaantiin Yuunvarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana’aas; meeshalee deeggarsaa kan wayita qabanii dhufan; qa’ee angaftichaatti simannaa nuuf taasifameetti gammaneerra jedhan.Hawaasni Yuunvarsiitii Booranaa, Abbootii Gadaafi jaarsoliin biyyaas deeggarsa taasifameetti gammaduun Yuunvarsiitii Amboos galateeffatanii jiru.